ကူညီခြင်းသည် ကောင်းပါသော်လည်း – THE CHINLAND POST
Group people community with disabilities wheelchair handicap. Color vector illustration EPS8
2022 April 17 — တစ်ပါးသူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့) လူအုပ်စုတစ်စုအား ကူညီခြင်း၊ သူတို့အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ဘာသာမဆို၊ မည်သည့်လူမျိုးမဆို၊ မည်သည့် ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မဆို ချီးကျူးအားပေးသော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်းလည်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွင် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ၊ တစ်ပါးသူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမှုများ ဆထက်တပိုး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ Laica in relnak LINK.
သို့ရာတွင် တစ်ပါးသူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့) လူအုပ်စုတစ်စုအား ကူညီခြင်း၊ သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်၏ နောက်တွင်ရှိသော စိတ်နေသဘောထား (Attitude)၊ သဘောထားခံယူချက် (Concept) နှင့် ထို့သို့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည့် ရလဒ် (Impact) တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့မစဉ်းစားမိပါက မိမိတို့ကူညီမှုကြောင့် အကူအညီခံရသူများသည် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်စေပါသည်။ ခုတ်ရာတစ်ခြား၊ ရှရာတစ်ခြား ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိခံယူထားသည့် မသန်စွမ်းမှုရှုထောင့် (Concept)က အရေးကြီးပါသည်။
ခေတ်ကာလတစ်‌လျောက်တွင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြီးက မသန်စွမ်းသူများအတွက် တောက်လျောက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ သို့သော်ယနေ့အချိန်အထိ မသန်စွမ်းသူများသည် လူမှုအသိုင်း အဝိုင်းအတွင်း မသန်စွမ်းမဟုတ်သူများကဲ့သို့ မပါဝင်နိုင်ကြသေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မသန်စွမ်း သူများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း (သို့) ကူညီပေးခြင်းတို့သည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များ (Concept) မမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ Concept မမှန်ပါက လုပ်ရပ် မမှန်နိုင်၊ လုပ်ရပ်မမှန်က ရလဒ် (Impact) လည်း မကောင်းနိုင်တော့ပေ။
မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် Charity Model ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၏ ချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်းကိုထောက်၍ သနားစရာကောင်းသူများ၊ လူစဉ်မှီသူများအဖြစ် အများ ပြည်သူများအား မီးမောင်းထိုးပြပြီး ထိုသနားစရာကောင်းသူများကို ကယ်တင်ရန်အလှူခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ကြည့်ပါလား၊ သူမှာ ခြေထောက်မရှိဘူး၊ သနားစရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကို လှူမှဖြစ်မယ်၊ မလှူရင် သူဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆို၍ အလှူခံခြင်းမျိုး။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းသူများသည် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း၏ သနာစရာအကောင်းဆုံးသူများဖြစ်ကာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း သိက္ခာရှိသော လူသားများအဖြစ် ဘယ်တော့မှ ရပ်တည်နိုင်လာမည် မဟုတ်ပါ။
မသန်စွမ်းသူများ၏ ချို့ယွင်းချက်ကို ထောက်ပြပြီး အကူအညီရှာခြင်း၊ အလှူခံခြင်းသည် မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မသန်စွမ်းသူများကူညီရာ မရောက်ဘဲ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားရာ ရောက်ပါသည်။ Privacy ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးများကို တန်ဖိုးထား လေးစားသည့်၊ လူလူချင်းတန်ဖိုးထား တတ်သည့် ယခုခေတ်တွင် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် ပို၍ပင် မသင့်တော်တော့ချေ။
ထိုသို့ဆိုရာတွင် မသန်စွမ်းသူများအား ကူညီစရာမလိုတော့ဘူးလားဟု မေးစရာရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းများကို ကူညီရပါမည်။ မဖြစ်မနေကူညီရပါမည်။ ပုံစံအနေအထား (Identity) ကြောင့် ကူညီခြင်းမျိုးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေ (Condition) ကြောင့် ကူညီခြင်းကြောင့် ကူညီခြင်းမျိုးဖြစ်ရပါမည်။ ဥပမာ – ချိုင်းထောက် ပံ့ပိုးမည်ဆိုပါစို့။ ခြေထောက်မကောင်းလို့ ချိုင်းထောက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရပ်ရွာအတွင်း အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်ခြင်းမရှိလို့ ချိုင်းထောက်ပေးတာမျိုးဖြစ်သင့်ပါသည်။ မျက်စိမမြင်လို့ စားစရာပေးတာထက် ယခုလို crisis ကာလမှာ စား၊ ဝတ်၊ နေရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် စားစရာပေးတာမျိုးဖြစ်သင့်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ မသန်စွမ်းမှုတွင် Charity က လူတစ်ဦး၏ identity အတွက် လုပ်ဆောင်ပြီး Humanitarian အလုပ်ကတော့ condition အတွက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ Charity သည် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆိုင်ပြီး Humanitarian ကတော့ အခြေအနေနှင့်ဆိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တစ်ပါးသူတစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့) လူအုပ်စုတစ်စုအား ကူညီခြင်း၊ သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသော်လည်း မသန်စွမ်းသူများအား ကူညီလိုပါက concept မှန်ဖို့ လိုပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၏ identity ကို အကြောင်းပြုပြီး ကူညီခြင်းထက် condition မှ လွန်မြောက်နိုင်ရန် ကူညီခြင်းမျိုး ဖြစ်သင့်ပါသည်။
Previous I bawmhchanh cuaṭha ko nain…
Nikhat chungah covid-19 mizaw thar 490 hmuhasi, zawtnak aa chawnhmi 605,000 leng an si